Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Dalka Oo Ammaanay Barnaamijka Wacyi-gelinta Cod-bixiyaha – Radio Daljir
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Dalka Oo Ammaanay Barnaamijka Wacyi-gelinta Cod-bixiyaha
Luulyo 29, 2018 5:46 g 0
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuummadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa sheegay in dardar-gelinta barnaamijka Wacyi-gelinta Cod-bixiyaha ay muujinayso in meel wanaagsan la marsiinayo dadaalka loogu jiro hir-gelinta hanaankii doorasho qof iyo cod ah ay uga dhici laheyd Soomaaliya sannadka 2020-ka.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka oo ka qayb gelay Barnaamij uu soo diyaariyay guddiga madaxa banaanaan ee doorashooyinka qaranka oo xisbiyada siyaasadeed lagu weydiinayay qaabka ay u arkaan in loo wacyi-geliyo cod-bixiyaha, ayaa sheegay in hadii uu dhamaado barnaaijkaan ay ku xigto diiwaan gelinta cod-bixiyaha iyo samaynta goobihii ay cod-bixintu ka dhici lahayd.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayuu Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalku ku ammaannay heerka wanaagsan ee ay soo gaarsiiyeen hanaanka hir-gelinta rabitaanka shacabka Soomaaliyeed, isaga oo ku dhiirri geliyay in ay sii laba jibbaaraan hawsha ay qaranka u hayaan si awoodda dalka loogu celiyo gacanta shacabka Soomaaliyeed ayna shacabku u doortaan hogaanka ay doonayaan in uu aayahooda ka taliyo.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo diyaarinaya buug loogu tala galay wacyi-gelinta cod-bixiyaha oo la tashiyo badan lasoo sameeyay dhammaan dhinacyada ay khusayso ka qayb qaadashada fududaynta doorasha iyo talo ku daridda, ayaa maanta kulan Muqdisho ugu qabtay xisbiyada dalka, si ay uga uruuriyaan xisbiyadad talooyinka ay ku darayaan buugga ugu dambeynna loo helo hannaan wacyi-gelineed ay isla ogolyihiin dhammaan daneeyaasha doorashada dalka.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuummadda ayaa sheegay in sidii horay ummadda Soomaaliyeed uu ugu ballan qaaday madaxwynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaliya, madaxda qaranka ay ka go’antahay in doorasho qof iyo cod ah dalka ay dhacdo sanadka 2020-ka.
Barnaamijka wacyi-gelinta cod-bixiyaha waxa uu ku hagayaa madawaadiniinta Soomaaliyeed fahamka dhammaan hanaanka ay codkooda u dhiiban lahaayeen si ay go’aan uga gaaraan hogaamiyaasha dalka ee mustaqbalka.
Beeraleyda Timirta Gobolka Bari ee Laag, Galgala iyo Karin (dhegayso/daawo)